“Waxaan ugu bushaaraynayaa reer Berbera in 9 ceel oo cusub oo biyo macaan leh loo qoday”…wasiirka biyaha | SDWO.COM & SomalilandNews.net
“Waxaan ugu bushaaraynayaa reer Berbera in 9 ceel oo cusub oo biyo macaan leh loo qoday”…wasiirka biyaha
Hargaysa (SDWO): Wasiirka wasaaradda biyaha Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali (Koore), ayaa ugu bushaareeyay bulshadda ku nool magaaladda Berbera in ay dhawaan ka baxayaan biyo yaraanta mudadda dheer soo haysatay.
Waxaanu sheegay wasiirku in 9 ceel biyood oo cusub ay ku kordhiyeen ceelashii ay hore uga cabi jirtay Berbera, isla markaana wax ka yar 2 bilood ay filayaan in ceelashaas cusub la dhamaystiro.
Saleebaan Cali Koore, waxa kaloo uu tilmaamay in bulshadda reer Berbera oo muddo dheer ka caban jiray biyo la’aan looga baahan yahay in ay u dul qaataan wakhtiga yar ee ka hadhay dhamaystirka ceelasha cusub.
“Waxaan leeyahay bulshadda reer Berbera, wakhti aad u badan ayaad soo biyo la’aydeen. Laakiin waxaan ugu bushaaraynayaa in imika 9 ceel oo cusub oo biyo macaan leh loo qoday. Gumar ayaa laga qoday, Kala-jeexa ayaa laga qoday.
Kuwo kale-na waxaa lagu kordhiyay meeshii hore ee ay magaaladu ka cabi jirtay. Waxaan filayaa in dhawaan aanay Berbera biyo la’aan danbe ka caban doonin.
Bulshadda Berbera waxaan leeyahay, muddo badan ayaa biyo la’aan ka cabanayseene, sugga in yar baa ka hadhay wakhtigii aad biyo la’aanta ka baxayseen”ayuu yidhi wasiir Koore oo maanta xafiiskiisa kula hadlay SAAB TV.
Geesta kale wasiir Koore, waxa uu ka hadlay degaamadii ay dufaantu ku dhufatay oo meelaha qaarkood ceelasha biyaha ay waxyeelaysay. Waxaanu sheegay in ay soo kormeereen goob kastoo ay ceelashii laga cabi jiray ka bur-bureen.
“Wasaaradu way tagtay meel kastoo ay dhibtu gaadhay, Laas-qoray ilaa Saylac. Dhibta xagga biyaha ee dadka gaadhayna wasaaradu aad ayay ula socotaa. Waana baahi taagan oo qaran ahaan iyo umadd ahaanba in aynu wax ka qabano.
Cidii aan la kaashan karno, ee beesha caalamka ahna aynu la kaashano, arrintaana wax ka qabashadeedda waa lagu gudo jiraa”.